अमिताभ बच्चनले बोले झूट ! - अमिताभ बच्चनले बोले झूट ! -
अमिताभ बच्चनले बोले झूट !
उज्यालो प्रतिनिधि २३ पुष २०७७, बिहीबार कला/साहित्य
काठमाडौँ । अमिताभ बच्चन सोशल मीडियामा धेरै सक्रिय छन्। बुधवार (६ जनवरी) ब‍िग बी (Big B) ले त्यस्तो तस्वीर सार्वजानिक गरे, जुन पछि प्रशंसकहरूले उनीबारे चिन्ता गर्न थाले।
उनले सोशल मिडियामा एक तस्वीर साझा गरे र भने कि हालै छोटो यात्रामा उनी लद्दाख गए, जहाँ तापक्रम-३३ डिग्री थियो।
फोटोमा उनले क्याप, पन्जा, स्नो गगल्स र ट्र्याकिङ ज्याकेट लगाएको देखिन्छ र उनले यती गर्दा पनि उसलाई बचाउन नसकेको बतायो। तर यो खबर छ कि उनी छोटो यात्रामा लद्दाख गएनन् । उनले मानिसहरूलाई मजाकमा झुट बोले ।
अमिताभ बच्चनको यो तस्वीर देखेर प्रशंसकहरूले उनको स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता गर्न थाले। दैनिक भास्करको समाचारका अनुसार अभिनेताका मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंतले भने कि यो फोटो कुनै विज्ञापन फिल्मको लागि शुटिङको जस्तो देखिन्छ।
उनले चिसोबाट बचाउने पोशाकमा एक भारतीय तेल विज्ञापनमा शुट गरे । यो मुम्बई फिल्म सिटीमा शूट गरिएको छ। उनी हालै लद्दाख गएका छैनन् भएको छैन ।
कर्साङ लामाको संगीतमा आकाश र सिर्जनाको ‘ङाला माया’
बाथरूममा मृत अवस्थामा फेला परिन् यी अभिनेत्री, खुल्न
काभ्रे भैँसेपाटीमा ‘मिनी फिल्मी सिटी’को प्रक्रिया शुरु